Semalt: Content Scrapers. Nzira Yokuwana Nayo Ndiani Ari Kubata Zvako
Kana iwe uri blogger kana munyori wenyaya, mikana iwe unoziva zvose pamusoro pezvokudya scrapers. Cherechedza kuti zvigadzirwa zve scrapers zvinogona kukopa kana kubvisa webhu yako yega yega pamabhuku avo ega pasina mvumo. Zvimwe zvezvinyorwa zvinyorwa zvinongonyora uye kuisa mabhogi ako emabhadharo nguva dzose, apo vamwe vanoshandisa zvirongwa zvekutora kubva mu RSS feeds uye vanozviparidzira pawebsite dzavo. Pano ticharondedzera kuti tingawana sei ari kuba webhu yako yehutano uye zvii zvaunofanira kutora pamusoro pavo.
Ungaziva sei kuti nzvimbo yako iri kutorwa:
Kunze kwekuti iwe usingatsvaki zita rako rekutsvaga mu Yahoo, Bing kana Google, haugone kutarisa pasi mawebsite anobata zvinhu zvako nguva dzose. Kana uri kutarisa kuti uzive nezvevaya spam nhengo kana vatengesi, unogona kuedza chero ipi zvayo nzira dzinotevera.
Ndiyo nzira iri nyore uye yakajeka yokuziva kuti ndiani ari kuba zvinhu zvako paIndaneti. Iyi purogiramu inokubvumira kupinda ma URLs webhu yako yehutano uye uwane makopi ayo paWorld Wide Web. Iwe unogona kushandisa shanduro yaro isina kushandiswa nemaitiro mashomanana kana premium version iyo inokubvumira kuti uongorore anenge anenge 10000 mapeji ewebhu mamwe mashoma.
Unogona zvakare kuedza trackbacks yeWebsitePress yako kuti uone uye kuputsa pasi nzvimbo dzinoba zvinhu zvako zvishoma zuva nezuva. Kana iwe ukashandisa Akismet, dzakawanda zvezvikwata zvese zvinoratidzwa mune faira rako re spam. Chinokosha chekuziva uye kugadzira rekisterre ndeyekubatanidza hutano hwemashure ako nemagwaro makuru anchor. Mukati uye kunze kwekubatanidza kunokosha kune nzvimbo yako yekugadzirisa.
3. Zvimwe Zvishandiso zveWebmasters:
Imwe nzira yekuwana zvigadzirwa zvekushandisa ndeyokushandisa Zvishandiso zveWebmaster. Enda kuWebhu> Shanduro dzeGoogle Analytics account uye chengeta paMapeji Akabatanidzwa. Yese webhusaiti iyo yave ichibatanidza mifananidzo yako icharatidzwa munzvimbo ino. Kuti uwane hukama hwako pachayo panzvimbo ino, unongotanga kuvhara paimba uye uwane tsanangudzo yezvipi zvinyorwa zvewebsite yako zvakabiwa kusvikira zvino. Iko iwe uchakwanisa kuona kuti zvinoshamisa sei vari kukopa uye kudarika mazita ako mazita uye zvinyorwa zuva rega rega.
4. Google Zviyevero:
Kana usina kutumira nguva dzose uye uri kutarisa kuti uchengetedze nemashoko ako emabhulogi kana zvinyorwa kune dzimwe nzvimbo, unofanirwa kuumba Google Alerts uchishandisa mhinduro yakarurama yemashoko ako 'mazita kuchiisa mumashoko ekudzokorora.
Tora Chikwereti cheScraped Post:
Kana wakasika WordPress site, unofanira kuedza plugin RSS footer. Iko inobvumira vashandi kuisa zvidimbu zvemashoko enyu pasi kana kuti pamusoro pehuwandu hwe RSS feed. Uye kana iwe usiri weWebsite WordPress, unofanirwa kungosanganisira tsanangudzo pfupi kana kuti chinyorwa pasi kana kuti pamusoro pehupenyu hwako izvo zvinosanganisira mashoko akafanana uye zvinofanira kutaridzwa zvakanaka.
Nzira yekusimbisa sei zvinyorwa zvekugadzira?
Kana iwe usingadi kuti chero munhu abenge kana kukopa webhu yako yehutano, unofanira kutora zvishoma zvishoma. Chokutanga pane zvose, unofanirwa kuonana newaiti wepaiti uye kumubvunza kuti atore pasi mapeji ayo web content yako akanyorwa. Iwe unogona kumukurudzira kuti awane nyaya idzi dzibviswa pakarepo.
Kana pasina nzira dzekutaura nemutevedzeri, unofanira kuita Whois Lookup kuti uone kuti ndiani ane webhusaiti iyi kana zita remudunhu. Kana ikange isina kubhadharwa vari voga, iwe waizowana kero ye email yeomuteereri nyore nyore. Zvimwe, unogona kuonana naDoDaddy kana HostGator uye unovaudza kuti webhusaiti kana zita rekurumbira riri mubvunzo rinoramba richiba webhu rako uye rinofanira kubviswa kana kumiswa pakarepo.
Pakupedzisira asi kwete zvishoma, unogona kushanyira DMCA. Iwe unofanirwa kushandisa basa raunotora kuti uwane mifananidzo yako yekodzero, mavhidhiyo, mabhuku ebhulogi uye zvabviswa zvakabviswa. Kune dzimwe WordPress plugins dzinosanganisira DMCA dzakachengetedzwa mabheji, uye iwe unogona kuisa pawebsite yako kuti uyevere avo vanogona kukuvadza uye mbavha Source .